फुर्सदमा करिश्मा ढकाल रोधिघर धाउने खुलासा….(भिडियो) – Fewa Times
फुर्सदमा करिश्मा ढकाल रोधिघर धाउने खुलासा….(भिडियो)
प्रकाशित मिति: February 10, 2018 6:31 pm
काठमाडौँ – भर्खर मात्र बजारमा आएको फुर्सदको चौतारी अनलाईन रोधीघरको प्रस्तुतिमा रहेको गीति भिडियो सार्वजनिक भएको छ । मेलमिलाप डिजिटल प्रा.लि ले वजार व्यवस्थापन गरेको उक्त गीतमा गायक श्यामलाल कंडेल र गायिका देवी घर्ति मगरले स्वर दिनुभएको छ । गायक कंडेलकै लय रहेको उक्त गितमा शब्द भने रोजिना लिम्बुको रहेको छ ।
दिउँसो भरिको थकाई मेट्न साँझमा रोधिघरमा साथिभाईसँग भेट गरि रमाईलो गर्ने शब्द लाई रमाईलो सँग बुनेर बनाईएको सिर्जनालाई उत्तिकै रमाईलो भिडियोको निर्माण भएको छ ।
करिश्मा ढकाल र मिलन गुरुङको अभिनय रहेको उक्त भिडियोलाई अहिलेका चरचित र व्यस्त निर्देशक प्रबिन थापाले निर्देशन गरेका छन् ।
शक्कि प्रज्वल घिमिरेको छायांकन र सम्पादन रहेको उक्त भिडियोले बजारमा राम्रो चर्चा बटुली रहेको छ ।